Bit By Bit - Isingeniso - 1.5 Uhlaka lwalencwadi
Le ncwadi iqhubekela phambili ngokusebenzisa imiklamo emine yocwaningo: ukubuka ukuziphatha, ukubuza imibuzo, ukuqhuba ukuhlolwa, nokudala ukubambisana okukhulu. Ngayinye yalezi zindlela kudinga ubudlelwane obuhlukene phakathi kwabacwaningi nabahlanganyeli, futhi ngamunye usenza sikwazi ukufunda izinto ezahlukene. Okusho ukuthi, uma sibuza abantu imibuzo, singafunda izinto esingazifunde ngokubheka ukuziphatha. Ngokufanayo, uma siqhuba izivivinyo, singafunda izinto ezingenakwenzeka ngokubheka ukuziphatha nokubuza imibuzo. Okokugcina, uma sisebenzisana nabahlanganyeli, singafunda izinto esingakwazi ukuzifunda ngokuzibuka, ukuzibuza imibuzo, noma ukubhalisa ekuhlolweni. Lezi zindlela ezine zazisetshenziswe ngenye indlela eminyakeni engama-50 eyedlule, futhi ngiyaqiniseka ukuthi bonke bazobe besetshenziswe ngenye indlela eminyakeni engama-50 kusukela manje. Ngemuva kokunikezela isahluko esisodwa endleleni ngayinye, kuhlanganise nezinkinga zokuziphatha eziphakanyiswe ngaleyo ndlela, ngizozinikela isahluko esiphelele sokuziphatha. Njengoba kuchazwe kuNgqungquthela, ngizogcina umbhalo omkhulu wezahluko uhlanzekile ngangokunokwenzeka, futhi ngasinye sahluko sizophetha nesigaba esibizwa ngokuthi "Yini okufanele ufunde ngokulandelayo" ehlanganisa ulwazi olubalulekile lwezincwadi kanye nezincazelo ukuze uthole imininingwane eningiliziwe impahla.
Ngibheka phambili, esahlukweni 2 ("Ukuqaphela ukuziphatha"), ngizochaza ukuthi yini abacwaningi abangafunda ngayo ekuqapheliseni ukuziphatha kwabantu. Ngokuyinhloko, ngizogxila emithonjeni emikhulu yedatha eyenziwe izinkampani kanye nohulumeni. Ukususa kude nemininingwane yanoma imuphi umthombo othile, ngizochaza izici ezivamile zemithombo yedatha enkulu nokuthi lokhu kuthinta kanjani ikhono labacwaningi lokusebenzisa le mithombo yedatha yokucwaninga. Khona-ke, ngizobonisa izindlela ezintathu zokucwaninga ezingasetshenziswa ukuzuza ngempumelelo emithonjeni emikhulu yedatha.
Esahlukweni sesi-3 ("Ukubuza imibuzo"), ngizoqala ngokubonisa ukuthi abacwaningi bangafunda ngokuhamba ngaphesheya kwedatha enkulu. Ngokuyinhloko, ngizobonisa ukuthi ngokubuza abantu imibuzo, abacwaningi bangafunda izinto abangakwazi ukuzifunda ngokuzibona nje ngokuziphatha. Ukuze uhlele amathuba adalwe yisikhathi sobudijithali, ngizobukeza uhlaka lwendabuko lwenkokhelo yocwaningo jikelele. Khona-ke, ngizobonisa ukuthi iminyaka yobudala yedijithali yenza kanjani izindlela ezintsha kokubili isampuli kanye nokuxoxa. Ekugcineni, ngizochaza izindlela ezimbili zokuhlanganisa idatha yocwaningo kanye nemithombo emikhulu yedatha.
Esahlukweni 4 ("Ukuzama ukugijima"), ngizoqala ngokubonisa lokho abacwaningi abangakufunda lapho behamba ngaphandle kokubheka ukuziphatha nokubuza imibuzo yokuhlola. Ngokuyinhloko, ngizobonisa ukuthi izivivinyo ezilawulwa ngokungahleliwe-lapho umcwaningi angenelela khona ngendlela ecacile-vumela abacwaningi ukuba bafunde ngobuhlobo be-causal. Ngizoqhathanisa izinhlobo zemizamo esingayenza esikhathini esidlule ngezinhlobo esingazenza manje. Ngalesi sizinda, ngizochaza ukuhweba okuhilelekile kumaqhinga amakhulu okuqhuba ukuhlolwa kwedijithali. Ekugcineni, ngizophetha ngeseluleko esithile sokuthi ungayisebenzisa kanjani amandla okuhlolwa kwedijithali, futhi ngizochaza ngeminye yemithwalo yemfanelo ezayo nalawo mandla.
Esahlukweni sesi-5 ("Ukudala ukubambisana okukhulu"), ngizobonisa ukuthi abacwaningi bangadala kanjani ukusebenzisana okuningi-njengokuthi isisulu sabantu nesayensi yesakhamuzi-ukuze kwenziwe ucwaningo lwezenhlalakahle. Ngokuchaza amaphrojekthi wokubambisana okuphumelelayo nokuhlinzeka ngemigomo embalwa yokuhlela okuyinhloko, ngithemba ukukuqinisekisa ngezinto ezimbili: okokuqala, ukuthi ukubambisana okukhulu kungabambisana nokucwaninga kwezenhlalo, futhi okwesibili, abacwaningi abasebenzisa ukusebenzisana okukhulu bazokwazi ukuxazulula izinkinga ngaphambili ezabonakala zingenakwenzeka.
Esikwesahlukweni 6 ("Ukuziphatha"), ngizophikisana ukuthi abacwaningi banamandla okwandisa phezu kwabahlanganyeli nokuthi lezi zindlela zishintsha ngokushesha kunamasiko, imithetho nemithetho yethu. Le nhlanganisela yamandla akhula nokungabi nesivumelwane mayelana nokuthi lawo magunya kufanele asetshenziswe kanjani ashiya abacwaningi abanomqondo omuhle esimweni esinzima. Ukuxazulula le nkinga, ngizophikisana ukuthi abacwaningi kufanele bathathe indlela esekelwe ezimisweni . Okusho ukuthi, abacwaningi kufanele bahlole ucwaningo lwabo ngemithetho ekhona-engiyothatha njengoba inikeziwe-nangemigomo ejwayelekile yokuziphatha. Ngizochaza izimiso ezine ezisungulwe kanye nezinhlaka ezimbili zokuziphatha ezingasiza ekuholeni izinqumo zabaphenyi. Okokugcina, ngizochaza ezinye izinselele eziphathelene nokuziphatha engizilindele ukuthi abacwaningi bazobhekana nazo esikhathini esizayo, futhi ngizokunikeza amathiphu asebenzayo okusebenza endaweni enokuziphatha okungenakuhleleka.
Ekugcineni, esahlukweni sesi-7 ("Ikusasa"), ngizobuyekeza izihloko ezithinta le ncwadi, bese usebenzisa zona ukucabangela ngezihloko ezizobalulekile esikhathini esizayo.
Ucwaningo lwezenhlalakahle kule minyaka yobudijithali luzohlanganisa lokho esikwenzile esikhathini esidlule ngamakhono ahlukene kakhulu esikhathini esizayo. Ngakho-ke, ucwaningo lwezenhlalakahle luzobunjwa bobabili ososayensi bezenhlalo kanye nososayensi bemininingwane. Iqembu ngalinye linento yokufaka isandla, futhi ngamunye unokuthile okumele akufunde.